समाजसेवी ज्वाला संग्रौलाको नेतृत्वमा उठ्यो १२ लाख ८८ हज़ार ! खुसी हुदै न्युज२४को कार्यालयमा रबि लामिछानेकै हात बाट महाबीर पुनलाई हस्तान्तरण ! – Complete Nepali News Portal
समाजसेवी ज्वाला संग्रौलाको नेतृत्वमा उठ्यो १२ लाख ८८ हज़ार ! खुसी हुदै न्युज२४को कार्यालयमा रबि लामिछानेकै हात बाट महाबीर पुनलाई हस्तान्तरण !
ज्वाला संग्रौला आफ्नो फेसबुक वालमा जानकारी गराउनु हुन्छ : आज प्रेम दिवस , माटो संगको प्रेम , यो देश प्रेम संसारकै सबै भन्दा सुन्दर प्रेम । परदेशिहरुले आफ्नो पसिना मिसायर संकलन गरेको रकम आज घरदेशमा महाबिर पुन सरको हातमा थमाऊदै गर्दाको पल स्वर्णिम पल रह्यो । यो प्रेमका निम्ति सहयोगि मनहरु प्रति आभारि छौ ।
यो अभियानमा संसारभर छरियर रहेका नेपालिहरुले साथ दिनुभयो । जापानबाट महत्वपुर्ण रुपमा सहकार्य गर्ने अग्रज तथा समकालिन साथिहरु रबिन शर्मा , एचबि ताम्राकार , अर्जुन लम्साल, ज्याक खड्का, शिभ तण्डुकार, दिपा घिमीरे, रबिन शर्मा, गिरीजा गैह्रे र समुन्द्र श्रेष्ठ ज्यु लाई माहाबिर पुन सरले प्रेम सुनाईदिनुस भन्नु भयको छ ।
आफ्नो ब्यस्त समय हामिलाई ऊपलब्ध गराऊनुहुने आदरणिय प्रिय पत्रकार रबि लामिछाने ज्यु प्रति सधै झै ऊच्च सम्मान ।
त्यसैगरि युकेबाट इशा गुरुङ ज्यु , कोरिया बाट रामबाबु सेवन, अमेरिका बाट बिष्णु कार्की, अमेरिका बाटै ठूलो रकम सहयोग गर्नु हुने अर्जुन भुषाल सर, सच्ची मैनाली,कतार बाट नेत्र न्यौपाने सर र मिलन थापा, इज़रायलबाट शरिन ख्युङवा तामाङ , ओमनबाट बिनी गुरुङ र सबु सुनुवार , बेल्जियम बाट नारायन धिताल र सुनिता गुरङ ज्यु , हिमाल सर र जेरि सर प्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गर्न चाहन्छौ ।
यो प्रेम सबैका लागि , सधैका लागि । आऊनुहोस राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र निर्माणमा हातेमालो गरौ आज हस्तान्तरण भएको जम्मा रकम १२ लाख ८८ हज़ार थियो!